ko htike's prosaic collection: စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုမှစ၍……မဲပြားပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီ ………..…
စင်ကာပူကျွန်းပေါ်က Little Myanmar မြန်မာနိုင်ငံငယ်လေး တစ်ခုမှစ၍……မဲပြားပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီ ………..…
ကဲ….သူငယ်ချင်းတို့ ရေ စင်ကာပူမှာနေထိုင်အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသူအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် လူတွေ တစ်သိန်းလောက်ရှိကြသတဲ့….ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ "Vote No" သင်္ကြန်ဆိုတော့လဲ လူငယ်တွေအပြည့်ပဲမဟုတ်လား......မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲ ဆိုတော့လဲ ဒို့ လူငယ်တွေ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လား…။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ….. "စက်တင်ဘာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာ ……ငါတို့ ပြည်သူတွေ စစ်ကျွန်ဘ၀ကလွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့ရရှာတဲ့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအတွက် သွေးကြွေးဆပ်ဖို့ အတွက်…. မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ဖို့ …. စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကိုသွားကြစို့ ……
သူငယ်ချင်းတို့ ရေ….စစ်အစိုးရရဲ့အကျဉ်းချခြင်းကိုခံနေကြရတဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီးနဲ့ ၊ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေရယ်၊ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ မမျှအောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ရယ်… ငါတို့ တစ်တွေဟာ ဒီအချိန်မှာ…..မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်ခြင်း ဖြင့် ပေးဆပ်သွားသူတွေရဲ့အသက်သွေး၊ချွေးတွေကို ဂုဏ်ပြုကြရအောင်သူငယ်ချင်း……..
စင်ကာပူမှာ မင်းတို့ ငါတို့ ရှာ ထားတဲ့ ဒေါ်လာတွေကို အခွန်အဖြစ် သိမ်းယူပြီး မင်းတို့ ငါတို့ အတွက် ဘာမှပြန်လုပ်မပေးတဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင် အစိုးရကို ပြတ်ပြတ်သားသားကန့် ကွက်မဲတွေပေးကြစို့ ………..….စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကိုသွားကြစို့ ……
လက်ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အားလုံးဟာ မြန်ပြည်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ အတွက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်….. တာဝန်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အချိန်ကို လေးစားကာ ပြိုင်တူ တက်တက်ကြွကြွ သံရုံးကို သွားရောက်ပြီး "ပြတ်ပြတ်သားသားကန့် ကွက်မဲထဲ့ကြပါစို့ " လို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်….
အဲဒီတော့......သူငယ်ချင်းတို့ရေ ငါတို့ တတွေ …………..အချိန်တူ ……..နေရာတူ …..ပြိုင်တူ …….အသံတူ ………ဆန္ဒမဲတွေအတူတူပေးရအောင်…အားလုံးပြိုင်တူ သွားနိုင်မယ့်နေ့ ရက်ကတော့
အဲဒီလိုသာ လူတွေအများကြီးနဲ့စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးကို သွားပြီး တစ်နေ့ ထဲ၊ တစ်ချိန်ထဲမှာ အချိန်တူ၊ နေရာတူ(သံရုံး)၊ ကန့် ကွက်မဲများ ၀ိုင်းဝန်းပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်……
" ပြည်သူဟာ အင်အားဆိုတာကို ငါတို့ သက်သေပြနိုင်မယ်" …အရေးအကြီးဆုံးကတော့…. ငါတို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ငါတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို "စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာတွေကတော့….စောစောစီးစီး… မဲပြားပေါ်မှာကြက်ခြေခတ်လိုက်ပြီဟေ့" ဆိုတာကိုပြသလိုက်ဖို့ ပါပဲ……
Posted by ကိုထိုက် at 02:06
"မဲပြားပေါ်က ကြက်ခြေခတ် ပြည်သူ့ အောင်ပွဲမှတ်"
SU NANDAR said...
we r ready to vote no. twe kya thay tar pop kwarrrrrrrrrrrrr